ဓါတ်ဆရာ ရဲ့ ရိုက်ချက် ကို ကြွေတာလား? ရတီ့ကို ကြွေတာလား? လို့ ဆို လိုက်တဲ့ “သင်းရတီခင်” – Shwe Sar
ဓါတ်ဆရာ ရဲ့ ရိုက်ချက် ကို ကြွေတာလား? ရတီ့ကို ကြွေတာလား? လို့ ဆို လိုက်တဲ့ “သင်းရတီခင်”
ပုံလေးတွေတိုင်း သင်းရတီခင် တေစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ လန်းလွန်းနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ဆက်ဆီကျကျ ရိုက် ထားတဲ့ လန်းလွန်းတဲ့ ပုံလေးကို တင်ပေးလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းလှတဲ့ မော်ဒယ် သင်းရတီခင် ရဲ့ အလှပုံရိပ်လေး တွေ ကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်တယ်နော်။
အရုပ်မလေးလို့ ချစ်စရာ ကောင်းပြီး အမိုက်စား ခန္ဓာ ကိုယ်ကောက် ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တက်သစ်ဆ မော်ဒယ်လ် သင်းရတီခင် ကို သိကြမယ်ထင် ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောက ကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ် အများအပြားရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိ လာတဲ့ ကြော်ငြာ တွေပါ ရိုက်လာရတဲ့ မော်ဒယ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှု ရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social media လောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံတွေနဲ့ ညို့ အားပြင်းပြင်း ဆွဲ ဆောင်နိုင် သူလေးဖြစ်တာကြောင့် ဖေ့ဘွတ်မှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြတာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ပုံလေးများကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
Previous post အတွင်းအလှတွေ လျံထွက် နေ တဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပုရိသတွေကို ကြွေကျသွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ မျက်ဝန်း
Next post ပုရိသ‌တွေ ရင်အစုံကို လှုပ်ခတ်သွားစေမယ့် အကြမ်းစား ပုံတွေ ထုတ်ပြ လိုက် တဲ့ ရွှေအိမ်စည်